Irra guddaan dalaga fayyadama keetii kan dhihaacguu danda'u furtuuwwan qaxxaamuraa fayyadamuu dhaani. Fakkeenyaaf, furtuuwwan qaxxaamuraa Ajaja+OCtrl+Oseensa baafata Faayilii keessa Bani itti aanutti mul'ata. Furtuuwwan qaxxaamuraa fayyadamuun, yoo dalaga gahiinsaa barbaadde, dhiibiitii furtuu AjajaCtrl gaqqabi, ittaansuudhaan furtuu O dhiibi. Erga qaaqni mul'ateen booda furtuuwwan lachuu gaddhiisi.
Baafatawwan qaxxaamura waliin bilbiluu
Arfiileen baay'een kabala baafataa irratti mul'atan jala muramaniiru. Kallatiidhaan arfii jalmurame furtuu FILANNOO waliin baafatawwan kunneen geessisuuf ni daneessa. Baafatiichi altokko banamnaan,irra deebi'uu dhaan arfiilee jalmuraman ni barbaadda. Maalimawwan bafata kunneenii kallattiidhaan salphumaan furtuu arfii jalmuramee dhiibuudhaan geessisuu ni dandeessa.
DHIISII dhiibuun jijjiirrawaan osoo hin kaa'in qaaqa cufa.Xiyyeeffannoo qabduu irra kaa'uu yoo keessaa maqaa qabdichaa sartuqaa goodayyaa qofa hin ilaaltu,dabalataanis gaaddidduu furdaa qabdicha filatamee jalaa argita. Kun kan agarsiisu furtuu Galchuu dhiibuu dhaan qaaqa yoo baaste,qabduu sana dhiibuu waliin wal qixxeedha.
Yoo harkisuufi-kaa'uu fayyadamtu,hantuuttee waliin filuu yookin wantootaafi maqaalee cuqaasu dhaan Ajaja furtuuwwan jijjiirraa fayyadamuu ni dandeessa.Ctrl fi darbee darbee DirqalaAlt dalaggii dabalataa geessisuuf. Dalagawwan fooyya'an ni argamu yemmuu furtuuwwan gaqqabudhaan yeroo harkisni-kaa'i jijjiiruu unka qaree hantuutteetiin agarsiifamanidha. Yemmuu faayiloota yookin wantoota biroo filtu,furtuuwwan fooyyessaan filannicha dheeressuu ni danda'a dalagaawwan iddoo mijaa'etti ibsamu.Argamiinsi faankishinii kanaa Taliigaa Foddaa X kee irratti hundaa'a.
Barruu hunda filuudhaafAjaja Ctrl+A fayyadami. Filannoo haaquuf furtuu xiyya mirgaa yookin bitaa fayyadami.
AjajaCtrl+Del iddoo qarree irra wanta hundaa haaquuf gara dhuuma himaatti.
AjajaCtrl fi furtuu xiyya bitaa fi mirgaa fayyadamuun qarreen jechaa irraa gara jechootaatti utaaluu danda'a dabalataanis yoo furtuu Jijjiirraa gaqqabdu,jechi tokko kan biroo boodaan ni filatama.
SAAGNI haala saaguu giduuwalittii fi haalata barreeffamaa fi duubatti irra deeb'ii deebisi.
Furtuuwwan qaxxaamura AjajaCtrl+Z kan fayyadan yeroof gaabbii fooyyeewwanii ejjetoo tokkotiifi Barrichi haalojii jijjiirama jala qabaa duraan jiru qaba.
Qabduu xiyyeeffatme qaaqa keessaa kakaasa
Ibsa dirree too'annaa qaaqa keessatti amma filatame bana. Furtuuwwan qaxxaamuraa kunneen sanduuqawwan makaa qofatti kan faayya daman osoo hin taiin, qabduuwwan sajoo baafata pop-up waliin-furtuu dhiisi dhiibuun tarreeffama baname cufi.
Ajaja Dirriiraa fiixee ammee filatameef ibsa, sajoo yookiin too'annoo.
Xiyyeeffannoo foddaa xiqqoo ittiaanu keessaa olka'a(fakkenyaaf,galmee mada mula'annoo deetaa)
baafata jalqabaa kakaasaa(Baafata Faayilaa)
Galmee ammee (LibreOfficecufa,yemuu yalmeen banaa dhumaa cufame)
Amalli Mirgadaa bal'ina filatame fayyada. Yoo qareen jecha keessatti qubate, jechi kunis mallattoo mirgaadaa taasifama.
Amalii Yabbuu bal'ina filatame fayyada yoo qareen jecha keessatti qubattee,jechi kun yabbuudhaan taa'a.
Amalli Jalmuramee bal'ina filatamef fayyada,yoo qareen jecha keessaatti qubatee,jechi kun jalmurama.
Dhangii sirrii barruu filatame irraa haqa yookiin wantoota(akka Dhangii Duraantoo keessaa Dhaangessuu)
Bal'ina gidduu sochoosa(dubatti)
Furtuwwan qaxxaamura Dhaamsa Haarawwaa bal'ina keessaa kan kuussaa Faayaa:
Amaloota qaaqa bana.
Dhamsa haaraa saaga
Furtuwwan qaxxaamura bal'ina durraargii kuussaa Faaya keessaa:
Argii tokko ol mara.
Argii tokko gadi mara.
Kamashaa F6 walinii fili. Sajoo kamshaa barbaadame filuuf, xiyya Gadii fi xiyya Mirgaa fayyadamiAjaja Ctrl+Enter
Haalata Filannoo Qabannoo Baasi,gara Wanta Filannoo haalataatti deebisi.
Qabxii filatamee sochoosi(dalagawwan arfii-gara-tarsaa yeroodhaaf hin danda'u,garuu qabxiiwwan xumuraa hanga).
Fakkasa wanta filatamee piikseeli tokko sochoosa(Filannoo Haalata keessa)
Fakkasa Wantaa hangamtaa jijjiira(Haalata Filannoo Qabannoo keessaatti)
Fakkasa Wantaa naannessa(Marsaa Haalata keessaatti)
Amaloota qaaqa Fakkasa Wantaaf bana.
Qabxii fakkasa wantaa (Qabxii Filannoo haalata keessa) / Filannoo balleessa.
Qabxii dabalataa kan filannoo haalata keessaa fili.
Qabxii fakkasa wantichaa ittaanuu fili(Qabxii Filannoo Haalata)
Marsaa haalata keessaatti, handhuurri marsaa filatamuu ni danda'a.
Qabxii faakkasa wantichaa duraanii fili(Qabxii Filannoo Haalata)
AjajaCtrl+Enter sajoo filannoo irratti
Qabxii filannoo haalataa gadhisi. Fakkasani wantichaa sana booda ni filatama.
Qabxii fakkasa wantaa gulaaluuli (Qabxii Gulaali Haalata)